Mon Petit Avatar: Chicken aloo cutlets
Posted by Mon Petit Avatar at 10:31 PM
အမလည်း အာလူးကို ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ကြိုက်တယ်... အချိန်မရလို့ အဲဒီလို ကြော်မစားဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ... စားစရာတွေ ကြည့်ပြီး အခုလောလောဆယ်တော့ ဗိုက်ဆာနေပြီ... အိပ်ချိန်တန် မအိပ်... ဒီတော့ အချိန်မဟုတ် အချိန်ဟုတ်မှာ ဆာ... အဲဒီလို ဆာလာရင် မျက်စိရှေ့တွေ့သမျှ ကောက်စား... အင်း... ဝိတ်မကျတာ ဘာများဆန်းသလဲ နော်... :D :D
မွန့်အာလူးကက်တလိတ်ကိုကြည့်ပြီး တော်တော်စားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်...။ အဲလို အရွက်တွေအသားတွေနဲ့တော့ မကြော်ဖူးသေးဘူး...။ ရိုးရိုးအာလူးကက်တလိတ်ပဲကြော်စားဖူးတာ...။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်...။
အယ်း( ဟင့်
မော်နီတာကို ကောက်စားလိုက်ရ မကောင်းပဲရှိတော့မယ် :P
အာလူးကတ်တလိတ်ကြော်တွေတဝစားသွားပါတယ်။GreenTea နဲ.vanilla puff လေးတွေလဲ မြည်းသွားတယ်နော်။
အာလူး ကက်တလိတ် အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အစာသွပ်ပဲ စားဖူးတော့ အခုလို ကြက်သားနဲ့ ကြိတ်ထားတာ စားကြည့်ချင်တယ်၊ အရသာက ပိုပြီး နှံ့မယ် ထင်တယ်နော်...၊ သွားရည်ကျရ ပြန်ပြီ...။ ဟူး.....
စားစရာတွေ ငမ်းပြီး ပြန်သွားပြီ ညီမလေးရေ.
အာလူကတ်သလိပ် မမလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်..ပျင်းလို့ မလုပ်စားဖြစ်တာကြာပေါ့။ :)
အရမ်းကြိုက်တယ်။ ချင်ခြင်းတပ်သွားပြီ။ ကြက်သားထည့် မလုပ်ဖူးဘူး။ ထရိုင်းကြည့်မယ် ညီမလေးရေ....:)
hello Ama, i have boughtadomain for thanakharmay and it is my new address http:// www.thanakharmay.com. :) could you please change the link again? haveanice day Ama.
အောက်က puff နှစ်ခုက အတွင်းထဲက အနှစ်လေး နှိုက်စားချင်တာ လက်ကိုယားနေတာဘဲ ဟိ.. အာလူးကတ်သလိပ်က အရောင်လည်းလှတယ်။ အရသာတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူး...
ကြည့်ရင်သိပြီ။ အား ဗိုက်ဆာသွားပြီ။
မမသက်ဝေ ပြောသလိုပါပဲ စားချင်တာစားနဲ့ နောက်ဆုံးအိမ်က Omron ကြီးကိုဖိနပ်ဗီရိုအောက်ထဲက ထုတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဂဏန်းတွေကမလိမ်တတ်တာခက်တယ်။
မိုးငွေ့လေး ရဲ့ ဖက်ထုပ်လို ဒီနေ့လုပ်စားဖြစ်သေးတယ်။ စားရင်းနဲ့တောင်သတိရ ကျေးဇူးတင်မိသေးတယ်။
ဘေဘီရေ သာကူ သာကူ စားချင်နေတယ်။ ကန်စွန်းဥ ပြုပ်ပြီးသားတွေ တွေ့လို့ပိုစားချင်နေတာ။
အန်တီဦး နဲ့ မမရွှေဇင်ရေ အမြဲတန်းလာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်။
ဟုတ်တယ် ကိုညီလင်းသစ် အရသာပိုနှံ့သွားတယ်။
မမဝါ ညီမလဲ လုပ်စားရမှာ သိပ်ပျင်းတာ။ဒါပေမယ့် ဝယ်စားလို့ကလဲမရလို့။
လုပ်စားကြည့်ပါမမချစ်ကြည်အေး။ တကယ်တော့ အားလုံးကကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်တာကို သိရက်နဲ့အခုလိုလာအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ညီမလေး ရေ link ပြောင်းချိတ်လိုက်ပြီနော်။
တို့လဲ cream တွေကြိုက်လို့ဝယ်စားဖြစ်တာ ချောရေ။